Egwuregwu eletriki ọkụ eletrik dị mma maka ogo 0 dị n'okpuru ebe ugwu n'okpuru iji mpaghara ahụ. Ọ dịkwa mma maka ojiji na mpaghara ebe okpomọkụ dị elu karịa -45 ℃. Ike eriri igwe eletrik bụ 6 M * 48W / M. Akpaka thermostatic akara maka oyi mpaghara. Enwere onye na-achịkwa okpomọkụ iji chịkwaa ike ọkụ nke eriri kpo oku iji hụ na mmiri dị ọkụ. Bọmbụ gbawara agbawa na-egosi ọkwa: ExdIICT4, IP65 nchedo. A na-ahazi igbe nkwụsị ike nke eriri igwe eletriki iche iche na igbe nkwụsị njikwa okpomọkụ. Okpukpo nke mkpuchi mkpuchi ebe okpomọkụ bụ 30MM, na ihe mkpuchi bụ ihe na-eme ka ọkụ na-ere ọkụ. Voltaji: AC220V / 1PH / 50Hz.
green ABS eguzogide elu okpomọkụ nke 200 degrees, kemwepu Ọdịdị, adaba n'ihi na mgbe e mesịrị mmezi.
Ntinye mmiri na ntinye nke akwa anya:
HG / T20615 Flange njikọ. Njikọ njikọ bụ 1-1 / 2 DN40.
Nku anya iku ume bụ akụkụ ọkọlọtọ mba, anaghị emechi.
Ejiri 2 iberibe valvụ bọl na elu na ala, nwere ike ichebe oge 20,000 nke ịpụpụ mmiri. Ná ngwụsị nke iji, mechie valvụ bọl ma kpochapụ mmiri n'ime ikpere aka nke nku anya, hụ na ọ kpochapụrụ kpamkpam n'ime minit 12.
Eyewash horn bay maka bilateral mgbanwe, dị ka ị chọrọ ịgbanwe nke mmiri eruba.
Jikọọ na mmiri pọmpụ mmiri. Mmiri mmiri bụ 0.25MPa
Watergba mmiri mmiri: ≥120L / MIN
Nwee anya / ihu mmiri na-asọ ≥12L / MIN
Oge igbu oge Nkeji 15.
BH30-1062C: site na odo odo rue oroma, ebe mmiri na-asa ahụ na anya bezin na-agbalite na ọla kọpa
BH30-1062T: Ngwa anya ịsacha ọnụ na-aghọ ngwaọrụ ịsa anya
BH30-1062L: Site na odo nke ihe eji eme ihe na akwukwo ndu
0206-1062: Housinglọ kwalitebere na ụlọ igwe anaghị agba nchara
BH30-1062 (vetikal): site n'ụdị nke ihe mejupụtara ya na nkuanya anya, ịkagbu akuku ịsa ahụ
Nke gara aga: Liri abụọ mkpanaka anya washer
Osote: Igwe ọkụ anya ọkụ ọkụ eletrik